Madaxweyne Waare oo ka hadlay xiisada soo kala dhex gashay Somalia iyo Jabuuti… – Hagaag.com
Madaxweyne Waare oo ka hadlay xiisada soo kala dhex gashay Somalia iyo Jabuuti…
Posted on 4 Agoosto 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweyne Waare oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in wixii dhib ku ah Jabuuti ay iyagana dhib ku tahay, isla markaana maamulkiisa si aad u taabatay is bedelka ka socda Geeska Afrika iyo xiisada ka dhalatay sida uu yiri.
“Xiisada ka dhalatay is bedelka ka socda Geeska Afrika, aad ayay noo taabatay, waxaa la damqanay oo aan la xumaanay calool xumada iyo niyad jabka galay walaalaheena reer Jabuuti, runtii Jabuuti taariikh ayay ku leedahay Soomaaliya iyo maamulkaan Hirshabeelle, waa dad deris nala ah walaalo isku dhiig aan nahay, sideedaba abaalka in la gudo waayo, sida ayaga abaalka aan u galnay halgalnkii xornimada doonka u gudeen ayaa la rabaa inaan u gudno, sida la socotaan tirada ciidamada qalabka sida Jabuuti ay yihiin oo ay inta Ciidamo noo soo direen waa la qiyaasi karaa, howl galkaas walaaltinimo iyo dhiigga ay noo daadiyeen, iyo sama falka ay ka qeyb galaan fatahaadii Beledweyn ka dhacday iyo sida dadka u soo badbaadiyeen, intaba waa wax aad muhiim ah in la ogaado”ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle.
Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in arrimaha hadda jira ka dhex jira labada dal ay tahay wax u yaalla Madaxda qaranka iyo Madaxda Jabuuti, isagoo ku baaqay in xiisada jirta lagu dhameeyo si walaaltinimo.
“Wax alla wixii ay ka xun yihiin annaga waa ka xunnahay, wax alla wixii dhibaato ku ah anaga dhibaato nagu yihiin, wax alla wixii eed ay tirsanayaan gar ayay u leeyihiin, Madaxda qaranka iyo Madaxda Jabuuti ayay u taallaa, anaga waxaa rajeyneynayaa in si kalsooni ku jirta loo dhameeyo”ayuu yiri.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ka hadlayay is bedelka ka socda geeska Afrika ayuu sheegay in is bedelkaas iyo duruufaha diblomaasiyadeed ee daba socda ay dhibkooda leeyihiin, waxaana uu xusay in looga qeyb qaadan karo si wanaag iyo farxad ku jirta.
“Haddii geeddi la hayaamo oo la naq raaco oo meel barwaaqo la aado, waa in la wada aado oo barwaaqada laga qeyb qaato, meesha geeddiga dadna looga guuro, dadna barwaaqada aadaan suura gal ma ahan”ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle.
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Jabuuti oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa ku sugan Gobolka Hiiraan, waxaana maamulka Hirshabeelle wal wal ka qabaa in xiisada diblomaasiyadeed ee soo kala dhex gashay Soomaaliya iyo Jabuuti inay sababto in Jabuuti ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya.